Xalka iyo Dejinta Soomaaliya Isla Gacanta Soomaaliduu ku jiraa – Calan Qaran
September 20, 2016	by Shakra Hussein
Ma dhab baa Hadalka Beesha Caalamka ee Leh “Xalka iyo Dejinta Soomaaliya Isla Gacanta Soomaaliduu ku jiraa”?
Waxaa jira eray had iyo jeer lagu celceliyo muddadii dalkeena hooyo ee soomaaliya uu burbursanaa waxaana lagu doodaa “arrintu Soomaali bay u taal” ”. “Xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa gacanta Soomaalida”. Ma dhab baa taasi? Haa iyo maya. Haa, waa dhab haddii loola jeedo, haddaad adigu gacmaha laabato ma jirto cid kaloo wax kuu qabanaysa. Haddaad adigu danahaaga ilaashan weydo cid kastaa danteeda uun bay kaa fushanaysaa. Waa dhab haddii loola jeedo, dhibaatadani ma dhammaanayso ilaa ay Soomaalidu xaqiiqda fahamto kuna camal-fasho, ilaa ay ka waantowdo cudurradii dilay oo ay hooyo u tahay qabyaaladdu, ilaa ay meel uga soo wada jeesato sidii ay isku badbaadin lahayd, ilaa ay dunida kula hadasho cod midaysan iyo hadal cad.
Maya, dhab ma aha haddii loola jeedo “waan ku gawracayaa middida dhiigga lehna jeebkaagaan galinayaa ee isu dhiib boliiska!”. Haddii loola jeedo waxaan ku maqashiinayaa “heshiiya”, markaad heshiisaana waan isku kiin dirayaa oo idin kala didinayaa, waxaan idin oranayaa “dowlad dhista” markaad dhisataanna hoostaan ka curyaaminayaa. “dagaalka joojiya” dabkiisana anigaa hoosta ka shidaya, “madax doorta”, dhab ahaanna ma oggoli mid aanan anigu soo xulan oo danahayga u adeegayn, amarkayga oo keliyana ku shaqaynayn. Haddii loola jeedo dowladdii aan jeclahay markaan arko inay god ku sii dhacayso anigaa ka soo qabanaya (Itoobiya, 1991 ), Kenya (2008), adigana waa kugu sii tuurayaa haadaanta aad ka dhacayso, ka dibna waan kugu qoslayaa!
Eray kooban, “beesha caalamka” ama quwadaha dibaddu marka ay leeyihiin “arrintu Soomaali bay u taal” way ogyihiin dunida maanta in ayan jirin cid u madax bannaan arrimaheeda, Soomaalina hadalkeedba daa. Waa inaan fahamnaa ujeeddadoodu inay tahay inay ku qariyaan hagrashadooda iyo weliba hagardaamadooda, inay uga marmarsoodaan masuuliyadda ka saaran badbaadinta dalkaan iyo dadkaan, sidii loo badbaadiyey Illaahey ka sakow dhammaan dalalkii kale ee ku burburay dagaallada sokeeye, laga soo bilaabo Cambodia iyo Bosnia ilaa Liberia, Ivory cost, Seralyoon (Sierra Leone) iwm, kuwaas oo aan midkoodna la oran “arrintoodu iyagay u taal” balse lagu badbaadiyey olole caalami ah iyo gurmad laga daacad yahay, halka Soomaaliya oo keliya 25 sano lagu wadey “qawda maqashii waxna ha u qaban.
Qalinkii: Dr M.D.Afrax.
More in Faallooyinka
QORMO: RI’DEYDU HA II CODEYSO November 4, 2016
Norway oo shirqoolka badda Somalia lagu dhacayo ku qal-qaalisay Kenya September 21, 2016
Al-Shabaab steps up attacks in run up to the Somalia elections September 19, 2016